धनगढीलाई दक्षिण एशियाकै ब्यापारिक हब बनाउनेछु : धामी – गाउँपालिका
धनगढीलाई दक्षिण एशियाकै ब्यापारिक हब बनाउनेछु : धामी
मेरो इमान्दारिता र लगनशिलता नै जितको आधार हो
प्रकाशित मिति: आइतबार, कार्तिक १९, २०७४ समय: १६:४८:३३
पुख्यौली घर दार्चुला भई हाल धनगढी ३, चटकपुुरमा बसोबास गर्दै आएका रमेश धामी (३५) दुई दशकदेखि राजनीतिमा सक्रिय छन् । प्रारम्भीक चरणमा अखिलको राजनीतिबाट आफ्नो राजनीतक जीवन सुरुवात गरेका धामी २०५८ सालमा अखिल (क्रान्तिकारी) हुँदै २०५९ सालमा तत्कालिन बिद्रोही माओवादीको भूमिगत राजनीतिकमा होमिएका थिए । विभिन्न आरोहअवरोह पार गर्दै सुदूरपश्चिमको प्रमुख ब्यापारीक नाका धनगढीको नगर इन्चार्ज, जिल्ला कमिटी सदस्य हुँदै हाल धामी माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सम्मेलन आयोजक समिति सदस्यमा कार्यरत छन् । जहिल्यै राजनीति जनताका लागि हुनुपर्छ र नेता सुविधाभोगी हुनुहुँदैन भनेर सादगी जीवन बिताउँदै आएका धामी धनगढी क्षेत्रमा युवापुस्ताका लोकप्रिय नेता हुन् ।
धामीको बैचारिक र सधै जनतासामु गएर संगठन निर्माण गर्ने क्षमताका साथै लोकप्रियता देखेर एमाले र माओवादी केन्द्रको बामगठबन्धनबाट कैलालीको क्षेत्र नम्बर ५ को ‘ख’ बाट प्रदेश सभा सदस्यमा चुनावी मैदानमा उत्रेका छन् । यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत छ पत्रकार टंक कुँवरले धामीसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
–तपाईंलाई बामगठबन्धनले प्रदेश सभामा टीकट दिएको छ कसरी लिनुभएको छ ?
हो, धेरै साथीहरु आकांक्षी हुँदाहुँदै पनि मैले टीकट पाएको छु । त्यसलाई सकरात्मकरुपमा लिदै मेरो पार्टीप्रति र जनताप्रतिको इमान्दारिताको फल मिलेको महसुस भएको छ । मैले अब अत्यधिक जनमत सहित जितेर देश र जनताका लागि काम गर्ने अवसरकोरुपमा लिएको छु ।
–तपाईंको जित्ने आधार के हो ?
म निरन्तर जनता माझ छु । म जहिल्यै पनि मेरो क्षेत्रका हरेक घरधुरीमा गएर सुखोदुखोमा समावेश भई उनीहरुसँगै विकास निर्माण, टोलसुधारमा हातेमालो गर्दै आएको छु । यही मेरो जित्ने आधार हो । अनि तपाईंलाई थाहा नै छ यसपटक हाम्रो पार्टी र एमाले मिलेर संयुक्तरुपमा चुनावी मैदानमा उत्रेकाले हाम्रो जनमत अन्य पार्टी भन्दा दोब्बर छ । फेरि त्यसैमा मलाई स्थानीयले पार्टीको मात्र नभएर ब्यवहारिक भोट पनि हाल्ने भएकाले यही आधारका साथ मेरो जित सुनिश्चित छ ।
–तपाईंको कुन पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा हुन्छ ?
मेरो प्रतिस्पर्धामा त कोहि देख्दैन म । तैपनि काँग्रेस दोस्रो होलाजस्तो छ ।
–तपाईंले हिजोका दिनमा धेरै काम गरे भन्नुभयो तपाईंप्रति मतदाताको बुझाइ कस्तो छ ?
मैले राजनीति जीवन यसै क्षेत्रबाट सुरुवात गरी अहिलेसम्म पनि यही क्षेत्र मै क्रियाशिल छु । यस क्षेत्रका ढल, अतिक्रमण, डुबान, बाटोघाटो, शिक्षादिक्षा लगायतका समस्या बारे मलाई राम्ररी ज्ञान छ । उल्लेखित समस्या समाधान गर्न म जनता र सरोकारवाला निकाय माझ निरन्तररुपमा लाग्दै आएको छु । जनताले पनि रमेश धामी विकासप्रेमी र जोशजाँगर भएको युवा हो केही गर्न सक्छ जिताउनुपर्छ भनेर लागिपरेका छन् ।
–तपाईंले जित्नु भयो भने कस्ता कस्ता कामलाई प्राथमिकता दिनुहुनेछ ?
मैले जिते अल्पकालिन र दीर्घकालिन कार्ययोजना बनाई त्यही अनुरुप विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकता दिनेछु । धनगढी सुदूरपश्चि (हालको ७ नम्बर प्रदेश) को हब भएकोले स्वच्छ, हराभरा धनगढी बनाउने छु । यहाँका खोलानाला अतिक्रमणले वर्षेनी डुबान हुनेगरेको छ भने अर्कोतिर नगरको सौन्दर्यतामा कमी आएको छ । त्यसलाई हटाएर धनगढीलाई नेपालकै नमूना शहर बनाउनेछु । धनगढीमा रहेको सेती अञ्चल अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न, सर्वसुलभरुपमा गुणस्तरिय शिक्षा, धार्मीक पर्यटनमा जोड दिई वर्षेनी आन्तरिक र बाह्रय पर्यटकको हब बनाउनेछु ।
साथै, भारतसँग जोडिएको गौरीफण्टा नाकालाई ब्यवस्थित गरी अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार नाका बनाउन मेरो प्रमुख पहलकदमी हुनेछ भने उता चीन जानआउन पनि धनगढी हुँदै बझाङ र दार्चुलाको नाका छोटो र सुरक्षित भएकोले त्यहाँका नाकालाई खुलाएर धनगढीका साथै ७ नम्बर प्रदेशलाई दक्षिण एशियाकै ब्यापारीक क्षेत्र बनाउनेछु ।
–धनगढी त अन्नभण्डार पनि हो यहाँबाट पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न निर्यात हुनेगर्छ त्यसलाई सुधार्न के के गर्नुहुन्छ ?
मैले भने नि हर कुराको अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजना बनाएर अघि बढ्नेछु । जहाँसम्म तपाईंले धनगढीलाई अन्नभण्डार भन्नुभयो यो अन्नभण्डार मात्र होइन् जडीबुटी र धार्मीक पर्यटनको उच्च सम्भावना पनि भएको क्षेत्र हो । मैले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकरण गरी आत्मनिर्भर बनाउनेछु । किसानलाई सर्बसुलभरुपमा मल, बिउबिजन उपलब्ध गराउने मेरो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ भने किसानलाई हर औजार तथा बस्तुमा सहुलियत दिई उनीहरुको जीवनस्तर उकास्नेछु । साथै धनगढी क्षेत्रलाई रासायनिक मल भन्दा पनि प्रांगारिक मल प्रयोगमा प्रोत्साहन गरी अर्गानिक क्षेत्र बनाउन पहल गर्नेछु ।